काँग्रेसमा नयाँ खेल शुरु, सरकार कि महाधिवेशन ? - Baikalpikkhabar
काँग्रेसमा नयाँ खेल शुरु, सरकार कि महाधिवेशन ?
काठमाडौँ, १० चैत / नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनभन्दा पार्टी महाधिवेशन केन्द्रित छलफल चलाएको छ । ललितपुर सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा कांग्रेसले सोमबार पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीलाई बोलाएको बैठकमा नयाँ सरकार गठन विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको हो ।
बैठकमा तत्काल नयाँ सरकार गठन विषयमा कुनै छलफल नभएको पनि आवश्यक परे कांग्रेस वैकल्पिक सरकार दिन सधैं तयार रहेको नेता रमेश लेखकले बताए ।
मङ्गलबार, १० चैत, २०७७, बिहानको ०८:११ बजे